मन्टेश्वरीका शिक्षकको तलब जम्मा ८ हजार, दिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी || सुनौलो नेपाल
मन्टेश्वरीका शिक्षकको तलब जम्मा ८ हजार, दिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
ऋषि बस्याल असोज ५ – बाल विकास कार्यक्रम (मन्टेश्वरी) तर्फ देशभर ३६ हजार ५ सय ९३ शिक्षक शिक्षिका आवद्य भई कार्यक्रलाई सफल बनाउन प्रयास गरिएको छ । विगत दुई दशक देखि सञ्चालित कार्यक्रमका शिक्षक तलब मात्र पाँच सय रुपैयाँबाट सुरु भएको थियो । शिक्षकहरूको अनेक प्रयास पछि हाल त्यो तलब ६ हजार सम्म वृद्धि हुनु पुगेको छ । तर रमाइलो पक्ष त के छ भने प्रा वि नि मा वि मा वि स्तरका सरकारी कर्मचारीको तलब स्केल न्यूनतम २३ हजार तोकिएको छ ।
बाल विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका शिक्षकहरू आफ्नो हक–अधिकार प्राप्तिलागि सङ्घर्षमा उत्रिन वाध्य हुन पुगेको छ । यो कार्यक्रम सरकारले आ.व. २०५३÷०५४ मा ल्याएको थियो । यस अवधारण अन्तर्गत विपन्न वर्गका ३ देखि ५ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरू लाई स्कुल जान अभिप्रेरित गरिन्छ । यो एक प्रकारको मन्टेश्वरी कार्यक्रम हो । शिक्षामा प्रत्यक्ष आवद्य हुन नसकेका साना नानीहरूलाई खेलाउने , भुलाउने र पाँच वर्ष पछि स्कुल जान मानसिक रूपमा तैयार पारिन्छ । कार्यक्रममा आवद्य रहेका हजारौँ शिक्षकहरूले सरकारी निकायको यस तर्फका शिक्षकको न्यूनतम तलब सुविधा वृद्धि हुनुपर्ने माग राखी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्ट्याउने बजेट अन्तर्गत आ व २०७५ ०७६ को लागि १३ खर्ब ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यस कार्यक्रमका शीर्षकमा कुनै बजेट छुट्टयाईको देखिँदैन । यस तर्फका हजारौँ शिक्षकहरू खान सम्म नपुग्ने तलब मासिक ६ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाउनु पर्न अवस्थाको अन्तहुनु पर्ने उनीहरूको माग छ । भने सरकारी तहबाट यो विभेद पूर्ण अन्याय यथाशीघ्र सच्चीनु पर्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा समेटिने बालबालिकाहरूलाई खेल्ने, शिक्षण सामग्री तथा उचित बसोबास जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा सरकारी लगानी आकर्षित नभएकामा आक्रोश समेत पोखेका छन् ।
शुक्र, अशोज ५, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस